Iseti yeeTafile, iiGadi kunye neeSeti zePatio, iiMveliso zePet-ORION
Ikhitshi kunye neGumbi lesidlo sangokuhlwa
Igadi kunye nepatio
Ipaseji kunye nokungena
Ukuhonjiswa kwegumbi lokuhlala
Ubugcisa be-Wall Wall / iishelufa zokudada / Isibuko sodonga
Umququzeleli wegumbi lokuhlala
Iishelufa ezidadayo / ikofu / iitafile zokutya kwindawo zokuma ebusuku / iitafile ezisecaleni iibhentshi / izihlalo
Ikofu / Iitafile zokuLalisa ii-Nightstands / iitafile ezisecaleni iibhentshi / izihlalo / isikrini
Ukuhonjiswa kwegumbi lokulala
Amampunge kunye neebhentshi ezingenanto / Isakhelo sebhedi
Abaququzeleli begumbi lokulala
Iingubo zeengubo / isherifu edadayo
Isitya seDish / iTroli / iCart
Rack Wine & Izibuko Holder / Basket
Ifenitshala yaseGadini kunye nepatio
Iingcingo zeGadi / iiBhentshi zeGadi / iTafile kaMoses kunye nezitulo /
Ukuma kwezityalo / Iimbiza zeentyatyambo /
Igadi kunye nePatio Decor
Izibonda zegadi / Izilwanyana zentsimbi / Iigadi zomoya zentsimbi / iiChime zomoya / iiSpinners zomoya
Iambrela Yima / Iingubo zeengubo
Ukuhonjiswa kweHolo yendlela
I-Mirror Wall / intsimbi yobugcisa bodonga
Ipaseji kunye nefenitshala yokungena
Umgangatho ophezulu wezinto ezisemgangathweni liziko eliphambili lomgaqo-nkqubo wethu wemveliso ukubonelela ngeemveliso ezizinzileyo kubathengi bethu abathandekayo.
Iqela lethu lezinto zivelisa ukhuni, isinyithi kunye nefenitshala yeglasi yekhaya lakho kunye nekhitshi kunye noyilo lomsebenzi wobugcisa kunye neendlela ezininzi ozikhethileyo
Ixabiso elikhuphisanayo kunye nenkonzo emva kokuthengisa iya kuhlala ilixabiso lamava ethu kubathengi.
Ifenitshala yentsimbi eyenziweyo ifanelekile ukuba ibekwe kwiindawo ezininzi ezinjengee-balcony, amagumbi okulala, amagumbi okuhlala, njl. Ifanitshala yentsimbi zezona mveliso zithandwayo ngabantu ukuhombisa ikhaya, iofisi, izikolo, igadi kunye nepatio. Banika ikhaya inkangeleko entsha igcwele inkangeleko enomtsalane. Ke unga ...
Udidi olubalaseleyo lobuGcisa bentsimbi
Ubugcisa be-Iron 3 Ubugcisa bentsimbi, ngokubanzi, bubugcisa obuguqula ii-objets ezirhabaxa ezenziwe ngentsimbi (ekuthiwa zii-ironware) kwizinto zobugcisa. Nangona kunjalo, ubugcisa bentsimbi abuhlukanga kwizinto eziqhelekileyo zentsimbi. Umxholo wobugcisa bentsimbi kwiminyaka emininzi eyadlulayo, ukusukela ngeXesha le-Iron, abantu baqala ukuqhubekeka nemveliso zentsimbi ....
Imbali yokuhonjiswa kobugcisa bentsimbi
Into ebizwa ngokuba bubugcisa bentsimbi inembali ende. Iimveliso zobugcisa zentsimbi yesintu zisetyenziselwa ukuhombisa izakhiwo, amakhaya kunye neegadi. Iimveliso zokuqala zentsimbi zaveliswa malunga ne-2500 BC, kwaye uBukumkani bamaHeti eAsia Minor buqwalaselwa ngokubanzi njengendawo yokuzalwa yobugcisa bentsimbi. Abantu kwi ...
IINGCEBISO EZILULA UKUHLAWULA IKHAYA LAKHO NGOBHODI NOBUGCISA BOBUGCISA
Namhlanje kweli nqaku, ndingathanda ukwabelana nabahlobo malunga neengcebiso zokuhombisa ikhaya lakho ngendlela ekhethekileyo. Iindlela ezili-13 zokuhombisa zilula kakhulu kwaye ikakhulu zisekwe kubugcisa beplanga kunye nobugcisa bentsimbi ukwenza umtsalane kunye nendawo entle yasekhaya. To uyifaka njani isikrini seTV kunye nodonga olungasemva? ...
Yasekwa ngo-2013, OI & T Co., Ltd. ise Licheng disctrict isixeko Quanzhou kwiphondo Fujian, PR of China. I-OI & T Co Ltd izityalo zemizi-mveliso zigubungela indawo eyi-2,200 yeemitha zesikwere kunye nabasebenzi abangama-120 babasebenzi abaqeqeshiweyo kunye neqela elinamava labaphathi abaphambili. Iimveliso zethu eziphambili zibandakanyiwe kodwa azikhawulelwanga kwisinyithi, iinkuni & iimveliso zekhaya; ifanitshala yangaphakathi nangaphandle enjengeetafile, izitulo, izitendi zezityalo, iipaki zeentyatyambo, imihombiso yasekhaya kunye nezilwanyana zentsimbi ezihombisayo. Sinikezela ngeenkonzo ze-OEM kwaye samkela iiodolo ezenziwe ngokwezifiso ezivela kubathengi bethu abaphambili abavela eMntla Melika, eYurophu, e-Australia, Middle East, Japan nakwamanye amazwe.
Siqinisekisiwe yinkampani yamanye amazwe. Ivenkile nathi ngokuzithemba
Ukwaneliseka kwabathengi kunye ne-100% yokujonga ingxelo
Izinto ezinokuphinda zisebenze kwakhona kunye neemveliso ezinobuhlobo ze-Eco
ubugcisa bodonga lwesinyithi, Isinyithi sokuhombisa isitiya, isibane esikhokelwa, izibane zelanga, izibane zokuhombisa, isibane pendant ukukhanya,